उपचारमा आएका पुरुषहरुको लि” ,ङ्ग देख्दा लाज लाग्छ- महिला डाक्टर ! – List Khabar
Home / समाचार / उपचारमा आएका पुरुषहरुको लि” ,ङ्ग देख्दा लाज लाग्छ- महिला डाक्टर !
उपचारमा आएका पुरुषहरुको लि” ,ङ्ग देख्दा लाज लाग्छ- महिला डाक्टर !
admin November 12, 2021 समाचार Leaveacomment 307 Views
उनले आफ्नो अनुभव हामीलाई सेयर गरेकी छिन । महिला डाक्टरको पहिलो अनुभवमा उपचारमा आएका पुरुषको लि’ ,ङ्ग देख्दा लाज लाग्छ भन्ने कुरा सेयर गरेकी छिन । यौ’ ,न रो,ग तथा प्रस्तुती गराउने महिलाले उपचारको लागि महिला डक्टर नै पाए उचित हुन्छ । त्यस्तै यो रो,ग स,म्ब,न्धी समस्या लिएर गएका पुरुषको लागि उपचार गर्ने पुरुष डक्टर भए उपचारमा सहज हुन्छ । तर सबै स्वास्थ्य संस्थामा यस्तो कुरा सम्भव हुँदैन् ।
असहज परिस्थिती आएपनि चि,कि,त्सकले गर्नै पर्छ र बिरा,मी उप,चारको लागि जानै पर्छ । विपरित बिरामीमा यस्तो उपचार गर्न कठिन भएपनि गर्नै पर्ने हुँदा बिरामी पनि लजाउँनु हुँदैन् र चि,कि,त्सकले पनि यस्तो कार्यमा लाज मान्नु हुँदैन् ।यस्तै यौ’ ,न तथा प्रस्तुती रो,ग विशेषज्ञ डक्टर सृजना शर्मा पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतलम पोखरामा कार्यरत रहेकी छन् ।
उनले आफुलाई सुरुमा पुरुषहरुको देख्दा लाज लागेको खुलासा गरेकी छन् । युवा अवस्थामा यो रोगको बारेमा सिकाइ भइरहेको अवस्थामा यस्तो समस्या थुप्रै झेलेको बताएकी छन् । तर अब सिक्ने अवस्थामा होस या काम गर्ने क्रममा होस् यस्तो कुरा देखेर लाज मान्नु हुँदैन् । सिक्ने बेलामा सहज तरिकाले सिकेको छ भने काम गर्न पनि सहज हुन्छ ।
स्त्री रोगमा वरदान ल्याप्रोस्कोपी – नेपालमा पनि स्त्री रोगसम्बन्धी ल्याप्रोस्कोपी (दूरबिनबाट गरिने) सर्जरीको सुरुवात भएको छ । विश्वका अन्य देशमा धेरै पहिलेदेखि नै प्रयोगमा रहे तापनि नेपालका लागि भने यो नयाँ प्रविधि हो । यो प्रविधिको सुरुवात जर्मनीबाट भएको हो ।
यस प्रविधिमा भएको लगातार अध्ययन–अनुसन्धानबाट पेट चिरेर गर्ने श,ल्यक्रि,याभन्दा यो विधि सजिलो र भरपर्दो हो भनेर सिद्ध भएको छ । पेटबाट बच्चा निका,ल्नेबाहेक अन्य सबै रोगका श,ल्य,क्रि,या ल्याप्रोस्कोपी स,र्ज,रीका माध्यमबाट गर्न सकिन्छ । पेटमा ससाना घा, उ बनाई फाइबर अप्टिक इ,न्डो,स्कोपको मद्दतले तल्लो पेटका भित्री अ, ङ्गहरूका समस्या हेर्ने विधिलाई ल्या, प्रो, स्कोपी भनिन्छ । यस विषयमा स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. रंगिना शाहसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :
ल्या,प्रो,स्कोपी स,र्जरी महिलाहरूमा कसरी गरिन्छ ?
पुराना प्रविधिबाट अप्रेसन गर्दा बिरामीलाई बेहोस पारेर जुन अ,ङ्गमा ट्युमर वा समस्या छ, त्यसको माथि १० सेन्टिमिटर चिरेर गरिन्छ । छालाका चार–पाँच तहलाई चिर्दै उपचार गर्नुपर्ने अ,ङ्गसम्म पुगेपछि हातले औजारहरू चलाएर अप्रेसन गरिन्छ ।
ल्याप्रोस्कोपी सर्जरीलाई ‘कि होल सर्जरी’ पनि भनिन्छ । यो प्रविधिमा दुर्बिन र औजारका माध्यमले रो, गको पहिचान तथा उपचार गर्न सकिन्छ । यसका लागि पेट फुलाउन कार्बनडाइअक्साइड वा अन्य हावाको प्रयोग गरिन्छ भने उज्यालोका लागि प्रकाश पठाइन्छ । ग्यास, प्रकाश र दूरबिन पठाउन नाइटोनिर सानो प्वाल बनाइन्छ ।
समस्याग्रस्त भित्री अ, ङ्गहरू हटाउने उपकरण र रक्तस्राव रोक्ने औषधि पठाउन पेटको तल्लो भागमा दुईतिर अन्य स–साना प्वा, लहरू बनाइन्छ । अप्रेसन गर्ने अङ्गमाथि १ सेन्टिमिटरको प्वाल पारेर क्यामेरा छिराइन्छ । पेटभित्रका अ ,ङ्गको अप्रेसन गर्दा पेटभित्र छिराइएका क्यामेरा घुमाएर सब अ, ङ्गका अवस्था हेरिन्छ । त्यसपछि अ,प्रे,सन गर्ने अ, ङ्गको माथि अरू आधा–आधा सेन्टिमिटरका दुई-दुईवटा प्वा, ल पारेर औजारहरू छिराएर अ, प्रेस,न गरिन्छ ।
महिलाको कस्ता–कस्ता स्वास्थ्य समस्यामा ल्या, प्रो,स्कोपी विधिबाट श,ल्यक्रि,या गर्न सकिन्छ ? पेटबाट बच्चा बाहिर निकाल्ने बाहेक महिलाका अन्य सबैजसो स्वास्थ्य समस्यामा यो विधिबाट श, ल्य, क्रिया गर्न सकिन्छ । पाठेघरमा ट्यु, म,र पलाउँदा तथा एउटा निश्चित उमेरपछि हार्मोनको गडबडीले महिलाको पाठेघरबाट धेरै रगत बगेमा ल्या, प्रोस्को, पी सर्जरीका माध्यमबाट उपचार गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, डिम्बमा ट्यु,मर पलाएको, पा, ठे, घरमा बच्चा नबसेर डि, म्ब वा नलीमा बच्चा बसेको छ भने पनि ल्या,प्रो, स्कोपी सर्जरीका माध्यमबाट उपचार गर्न सकिन्छ । निःसन्तान, जीर्ण प्रकारका तल्लो पेट दुखाइ, तल्लो पेटमा मासु वा डल्लो पलाएको, महि, नावा, रीमा तल्ला पेट दुख्ने समस्या, महिलाको स्थायी ब, न्ध्याकरण तथा पाठे, घरमा हुन सक्ने विकृति पत्ता लगाउने जस्ता स्त्री ,रो, गसम्ब, न्धी स्वास्थ्य समस्या निदानमा पनि ल्या, प्रो ,स्कोपी प्रविधिद्वारा उपचार गर्न सकिन्छ ।
यस्ता अवस्थाको न्यूनीकरणका लागि हाल नेपालका सीमित अस्पतालहरूमा मात्र यो सेवा पाइने भएकाले नेपालका धेरै अस्पतालमा यो सेवाको विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारले पनि सरकारी तथा निजी अस्पतालका डाक्टरहरूलाई विदेश वा नेपालमै तालिम लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । तस्विर स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ डा. रंगिना लाइकङबम शाह
Previous ७ बार मध्ये यि दिन जन्मेका व्यक्तिले कमाउँछन् अत्याधिक धन ? जान्नुहोस् !
Next अब नेपाल एयरलाइन्सकै टिकटबाट विश्वका यि १० गन्तब्यमा उड्न पाइने